सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकण्ठ अर्यालले आफ्नो मन्त्रालयको नब्बे प्रतिशत काम विद्युतीय प्रणालीमार्फत् सम्पन्न गर्ने बताएका छन्।
विश्वका धनाड्य एलन मस्कले ४४ बिलियन डलरमा ट्वीटर किनेका छन्। ट्वीटर विश्वकै ठूलोमध्येको एक सोलस मिडिया कम्पनी हो।
एजेन्सी १३ वैशाख २०७९ मंगलबार १ मिनेट पाठ
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी वैशाखदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ।
नागरिक २० फाल्गुन २०७८ शुक्रबार २ मिनेट पाठ
एक्स ल्याबको ल्यापटप नेपालमा, कति छ मूल्य?
दुई दशकदेखि प्रबिधि क्षेत्रमा निकै चर्चा कमाइरहेको अमेरिकी कम्पनी बेस्ड एक्स ल्याबले आफ्नो नयाँ ल्यापटप एक्स/बुक सेरिज नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालनसँग सम्बन्धित सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न आउन आग्रह गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै हेलो नेपाललाई दिइएको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
एएनआई ४ असार २०७८ शुक्रबार १ मिनेट पाठ
शिव पोखरेल १८ जेष्ठ २०७८ मंगलबार ७ मिनेट पाठ
इन्टरनेट खरिदमा सुविसुसँगको सम्झौता भंग
प्रतिष्ठानले अब खुला बजार नीतिअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग इन्टरेनट सेवा खरिद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यो निर्णयसँगै पाँच दिनअघि तीन पदाधिकारीहरुको कार्यकक्षमा लागेको तालाबन्दी पनि खुलेको छ।
रोहित राई २१ वैशाख २०७८ मंगलबार ३ मिनेट पाठ
अमिताभ घोस ६ फाल्गुन २०७७ बिहीबार ५ मिनेट पाठ
विभिन्न सङ्घसंस्था, कार्यालय वा सङ्गठित संस्था तथा व्यक्तिले एकैपटक धेरै मोबाइल नम्बरमा एउटै सन्देश (एसएमएस) पठाउनुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नेपाल टेलिकमले एसएमएसमा आधारित विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ।
विश्वको अग्रणी इलेक्ट्रोनिक कम्पनी सामसुङले आफ्नो पछिल्लो फ्ल्यागशिप 'एस २१' सिरिज नेपालमा ल्याउने योजना बनाइरहेको छ।